Mpanamboatra sy mpamatsy fitafiana miaro - Orinasa mpiaro akanjo sinoa
Encl medika miaro ny maso ...
Protecti fitsaboana tsy azo ampiasaina ...
Fanary vovoka maimaim-poana ...
Tsy tenona 3ply fanary S ...
Tsy tenona 3ply fanary M ...
Akanjo fanokafana misokatra misokatra ho an'ny fitsaboana
Ity vokatra ity dia tsy misy steril; Azo ampiasaina any amin'ny hopitaly izy io ary manana permeability sy sakana tsara.
Izy io dia afaka manohitra an-tsakany sy an-davany ny fidiran'ny bakteria, viriosy, alikaola, ra, tsiranoka amin'ny vatana, sombina amin'ny vovoka amin'ny rivotra, afaka miaro ny mpitazona azy amin'ny tsimokaretina.
Akanjo fanokanana tsy fanenoman-damba tsy azo ampiasaina
Mampiasa tsy tenona ho akora fototra, amin'ny alàlan'ny fanapahana, fanjairana vita. Tsy mety maty ary azo atsipy.
Palitao fiarovana azo ampiasaina amin'ny fampiasana fitsaboana
Ny fisafidianana ny akanjo miaro dia mila mandinika lafin-javatra maro toy ny fiasa, ny habeny, ny karazany, ny fotoana azo ampiharina, ny fenitra fiarovana, sns. Ohatra, ireo karazana dia misy ny akanjo mifangaro, misaraka, miasa, ny fitafiana tsy mahazaka afo, ny akanjo fiarovana ara-pitsaboana, sns.